Keeniyaan Itiyoophiyaan Buufata Doonii Lamuu Haa Fayyadamtuuf Itti Jirti
Muummee Ministiraa Abiy Ahmed fi Prezdentii Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaattaa
Kalessa Mooyyaleetti seensa daangaa biyyoota lameenii ka eebbiisan Muummeen Ministiraa Abiy Ahmed fi Prezdentiin Keeniyaa Uhuuruu Keeniyaattaa kan amma ijaarsarra jiru buufata doonii Keeniyaa Laamuutti argamu darbanii daawwatanii jiru.
Keeniyaa, Itiyoophiyaa fi Sudaan Kibbaa kan wal qunnamsiisu ijaarsi buufata doonii kun sadarkaa gaariirrallee jiraa jedhu gaggeessitoonni lameen.
Prezdentiin Keeniyaa, Itiyoophiyaan biyyi galoo galaanaa hin qabne, buufata doonii kanatti akka fayyadamtuuf biyyi isaanii bu’uraalee misoomaa barbaachisan qopheessaa jirti jedhan.
Keeniyaattaan Itiyoophiyaa fi Keeniyaan ijaarsa daandii isaaniin walqunnamsiisu waliin ijaaranii waliin bulchuuf hojjetaa jiraachuu himanii, akka fakkeenyaattis daandii Mombaasaa Naayroobiin kutee Finfinneen geessu diriirsanii amma tajaajila kennaa jiraachuu eeran. Pirojektiiwwan daandii akkasii daldala biyyoota lameen jidduu jirus guddisuuf shora qabaachuus dubbatan.
“Ammas Sudaan Kibbaa Itiyoophiyaa fi Keeniyaa ka wal qunnamsiisu Buufata Doonii Lamuu ijaarsa isaa xumuraa jirra. Kanaanis Itiyoophiyaan lafoon karaa mooyyaleerraan Garba Hindiitti bahuu dandeessi jechuudha” Pirezdent Keeniyaattaa.Gama Keeniyaanis haga yoonaa, daandiin Lamuu Kaasee Garrisaa gahu, achirraan gara Isiyoolloo qaxxaamurus ijaaramee amma dhibbeentaa 80 gaheera jedhanii, daandiin dabalataa kun xumuramnaan Itiyoophiyaaf buufata haaraa ijaaramaa jiru kanatti dhimma bahuun ni salphataa jedhan. Keeniyaattaan akkuma duraan biyyootni lameen Mooyyaleetti magaalaa addaa dhaabuuf jedhan, mootummaan Keeniyaas Laamuutti magaalaa haarawa hundeessuuf akka jirus ifoomsaniiru.
Muummeen Ministiraa Abiy Ahmedis hojii gama Keeniyaan jiru jajan. Jiruu saba keenyaa jijjiiruuf buufatootni doonii akka Laamuu baayyee barbaachisoodhas jedhan.
“Gama Itiyoophiyaan fedhii buufatatti dhimma bahuu guddaatu jira. Garuu buufati akka lamuu hoo hin jiraanne waan omishne alatti erguu ka feenus alaa galfachuuf rakkoodha. Kanaaf buufati doonii kun itiyoophiyaa fi Sudaan Kibbaa tajaajiluu dandawuunsaa waan guddaadha.” Muummee Minsitiraa Abiy Ahmed.
Muummeen Ministiraa Abiy, mootummooleen naannoo yoo ijaarsa bu’uraalee misoomaa baballisan jiruun ummata naannoo gaanfa Afrikaa salphaatti akka jijjiiramus dubbataniiru.
Daawwannaa Muummee Ministiraa Abiy Ahmed fi Prezdenti Keeniyaattaa Laamuutti taasisan irrattis Muummen Ministiraa Keeniyaa duraanii Raylaa Odiingaallee argamanii jiru.
Loogiin Talaallii Ilaalchisee Jiru Biyyootii Hiyyeeyyii Miidhaa Jira: Hoogganaa Tokkummaa Mootummootaa
Yunaayitid Isteetis Talaallii COVID-19 Kan Jalqabaa Raggaasisuutti Dhiyaatte